Beesha Caalamka oo War deg-deg ah ka soo saaray Shirka DF Somaliya & dowlad goboledyada – HalQaran.com
Beesha Caalamka oo War deg-deg ah ka soo saaray Shirka DF Somaliya & dowlad goboledyada
Muqdisho (Halqaran.com) – Beesha caalamka ayaa soo dhaweysay wada-hadallada magaalada Muqdisho uga socda Madaxweynaha JF Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
War-saxaafadeed caawa kasoo baxay xubnaha Beesha Caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa waxaa Madaxda ku shireysa Madaxtooyada Soomaaliya lagu booriyay inay si buuxda uga wada qayb qaataan wadahadal dhab ah oo ujeeddadiisu tahay in heshiis ballaaran laga gaaro hannaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo, lana hirgelin karo.
Haddaba qeybga hoose ka akhriso War-saxaafadeedka Beesha Caalamka:
Saaxiibada Caalamka* waxay soo dhoweynayaan dib u bilaabashada wada-hadalka u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo shanta Dowlad Gogoleedyo ee Xubnaha ka ah Federaalka (DGXF). Saaxiibada [daneeya arrimaha Soomaaliya] waxay Madaxwene Maxamed Cabdullaahi ‘Farmaajo’ iyo Madaxweynayaasha DGXF ku bogaadinayaan ka-qaybgalka shirarkan muhiimka ah ee ka socda Muqdisho.
War-Saxaafadeedka ayaa waxaa siwadajir ah u soo saaray dalalka kala ah: Belgium, Boqortooyada Midowday ee Britain, Denmark, Dowladda Maraykanka, Finland, Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Ireland, Itoobiya, Japan, Jarmalka, Masar, Midowga Yurub, Norway, Qadar, Spain, Sweden, Switzerland, Talyaaniga, Turkey, Uganda, Urur-Goboleedka (IGAD), iyo Qaramada Midoobay.
Tags: Beesha caalamka taageertay shirka Madaxtooyada ka socda
DHAGEYSO: Sheekh Shibli oo wax laga waydiiyay waxa ay Shareecada ka qabto in laga xaalo Kufsiga